राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य सर्वेक्षण २०१६ : सुधारियो पोषण स्थिति | गृहपृष्ठ
Home समाचार राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य सर्वेक्षण २०१६ : सुधारियो पोषण स्थिति
राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य सर्वेक्षण २०१६ : सुधारियो पोषण स्थिति
काठमाडौं । पछिल्लो २ दशकमा देशको पोषण स्थितिमा सुधार आएको देखिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको जनस्वास्थ्य सर्वेक्षण–२०१६ ले यस्तो देखाएको हो । सर्वेक्षणअनुसार नेपालीको उचाइ र तौलमा सुधार आएको छ ।
सर्वेक्षणमा नेपालका ५ वर्षमुनिका बालबालिकामा ३६ प्रतिशत पुड्का, २७ प्रतिशत कम तौल भएका र १० प्रतिशत ख्याउटे भएको देखाएको छ । सन् १९९६ मा गरिएको जनस्वास्थ्य सर्वेक्षणले त्यस्ता बालबालिकामध्ये ५७ प्रतिशत पुड्का, ४२ प्रतिशत उमेरअनुसारको तौल नपुगेका र १५ प्रतिशत ख्याउटे देखाएको थियो ।
पोषणसम्बन्धी अध्ययनको सरकारी तथ्याङ्कलाई मात्र हेर्ने हो भने पनि देशमा पोषण स्थितिमा क्रमिक सुधार आएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले सन् २०११ मा गरेको चौथो जनस्वास्थ्य सर्वेक्षणमा ५ वर्षमुनिका बालबालिकामध्ये ४१ प्रतिशत पुड्का, २९ प्रतिशत कम तौलका र ११ प्रतिशत ख्याउटे देखाएको थियो । सरकारले सन् १९९६ मा पहिलोपल्ट स्वास्थ्य सर्वेक्षण गरेको थियो । अहिले प्रत्येक ५ वर्षमा सरकारले स्वास्थ्य सर्वेक्षण गर्दै आएको छ । सन् २०१६ मा गरिएको स्वास्थ्य सर्वेक्षण पाँचौं हो ।
२० वर्षको अवधिमा पुड्का बालबालिकाको सङ्ख्या ५७ बाट २१ प्रतिशत घटेको छ भने कम तौलका बालबालिकाको सङ्ख्या ४२ बाट १५ प्रतिशत घटेको छ ।
यसैगरी ख्याउटे बालबालिकाको सङ्ख्यामा पनि सुधार आएको छ । समीक्षा अवधिमा यस्ता बालबालिकाको प्रतिशत १५ बाट १० मा झरेको छ । तर, तथ्याङ्क सुधारिएको हेरेर मात्र सन्तोष मानिहाल्ने ठाउँ भने छैन ।
अहिले पनि देशभित्रका १ तिहाइ बालबालिका पर्याप्त पोषणतत्त्व नपाएर पुड्का छन् । त्यसमध्ये शहरी क्षेत्रका ३२ र ग्रामीण भेगका ४० प्रतिशत छन् । उनीहरूले अझै पर्याप्त पोषणतत्त्व पाउन सकेका छैनन् ।
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार बालबालिका बढ्दो उमेरअनुरूप पोषणतत्त्व नपाएपछि पुड्का, ख्याउटे र कम तौलका हुन्छन् । पुड्कोपनले दीर्घकालीन कुपोषणलाई जनाउने स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बद्ध विज्ञहरू बताउँछन् । ख्याउटेपन पनि दीर्घकालीन कुपोषणको लक्षण हो । मन्त्रालयले अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डअनुसार बालबालिकाको उचाइ र तौलको तुलना गरी पोषण स्थिति मापन गरेको बताएको छ । प्रदेशअनुसार सबैभन्दा बढी पुड्कोपन प्रदेश नं. ६ मा ५५ प्रतिशत रहेको छ । यस्तै ३ र ४ नं. प्रदेशका २९ प्रतिशत बालबालिकामा पुड्कोपन पाइएको छ । सर्वेक्षणअनुसार गरीब घरपरिवारका अशिक्षित आमाहरूबाट जन्मिएका बालबालिकामा बढी पुड्कोपन पाइएको छ ।
नेपालीको प्रजनन स्तर तथा प्राथमिकता, वैवाहिक स्थिति, महिला सशक्तीकरण, घरेलु हिंसा, उच्च रक्तचाप तथा पोषणजस्ता स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित आधिकारिक तथ्याङ्क सङ्कलन तथा अद्यावधिक गर्न स्वास्थ्य सर्वेक्षण थालिएको हो । यस्ता सर्वेक्षणबाट सरकारले अन्तरराष्ट्रिय मञ्चमा सम्बन्धित क्षेत्रको वास्तविक चित्र प्रस्तुत गर्न सहयोग पुग्नुका साथै सहस्राब्दी विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न पनि सघाउ पुग्ने बताइएको छ ।
सर्वेक्षणका लागि देशभरबाट ११ हजार घरपरिवार छनोट गरिएको थियो । त्यसमा १५ देखि ४९ वर्षसम्मका १२ हजार महिला र १५ देखि ४९ वर्षसम्मका ४ हजार पुरुष घरमुली थिए ।